Life Insurance products we have been providing are:
1. Endowment Life Insurance (long term basis, insurance term is at least5years)
2. Term Life Insurance (1 year term)
Snake bite life
Term Life Insurance This long term basis life insurance product is with saving aspect. Providing benefits for maturity, anent disability and death.
Age Limit – 18 to 55 (insured’s age shall be at least 18 and not older than 55)
Insurance Term – at least5years (term more than5years shall be within age limit)
Sum Insured – Ks. 50,000 up to 30,000,000
Premium – Premium based on age, term, sum insured. Insured’s occupation and body
weight will be taken into account of additional premium.
Benefits – The following benefits are entitled.
Benefit for Death – in case of death during insurance term, lump sum of sum insured will be paid to beneficiary.
Benefit for total permanent disability – If the assured suffers from total permanent disability during insurance term, lump sum of sum insured will be paid to the insured.
Benefit for the maturity – lump sum of sum insured will be paid to the insured. (this benefit is not entitled to beneficiary)
Surrender Value – Insured may surrender his/her life insurance policy.
Short term policy (5-12 years) is entitled to surrender when premium payment has made for2years. Long term policy (13 and above years) is entitled to surrender when premium payment has made for3years.
Surrender value = 30 % of paid premium
(government employee’s life insurance policy’s surrender value is 80% of paid premium).
Paid-up Value – Life insurance policy may paid-up instead of surrender. Paid-up value may withdraw only at the end of term.
No. of years of premium paid
Paid-up Value = Sum Insured x ————————————
Discounted Value – Government employee’s life insurance policy is entitled to discounted value only at the time of2years before the maturity. Paid premium with deduction of 6.25 % interest may withdraw as discounted value.
Loan –Insured may loan 95% surrender value. Interest rate on loan is only 6.25% per year.
Medical Examination Requirement – Medical Examination Report requires.
Insured – Employer may buy this insurance for his/her Employees.
Limit of Group – At least5employees are in group foragroup life insurance policy.
Age Limit – 18 to 60
Sum Insured – from Ks. 10,000 to Ks. 5,000,000 (for each insured)
(If age is over 45 and sum insured is in excess of Ks. 1 million, medical examination report requires.)
Premium – Ks. 100 per Ten Thousand (i.e. 1 % on sum assured)
Benefit – Lump sum of sum insured for dead and total permanent disability. Maximum 50% of sum insured is provided for bodily injury
Sportsman’s Life Insurance
Insured – Sportsman (From school level to Myanmar Selection) may buy this
insurance. Dead and injury caused by accidents during training and competition.
Age Limit – from 10 to 60
Sum Insured – Ks. 1,000,000 (1 unit),
(Limit of sum insured is up to5units for each sportsman)
Premium – Ks. 5,000 (1 unit)
Benefit – Lump sum of sum insured for dead and total permanent disability. Maximum 50% of sum insured is provided for bodily injury. Hospitalization benefit is Ks. 10,000/- per week up to 52 weeks. Additional Cover Only for Myanmar selected sportsman:-
Air Travel – Sum insured – Ks. 5,000,000
Premium – Ks. 1000
Days of stay – Sum insured – Ks. 1,000,000
Premium – Ks. 500 (for7days)
Ks. 1000 (for 1 month)
Snake Bite Life Insurance – For any person. Cover only snake bites.
Sum Insured – Ks. 500,000- (1 unit), Limit of sum insured is up to 10 units for each person)
Premium – Ks. 500 (1 unit)
Benefit – Dead, bodily injury, medical expenses, charges for taking patient to the near hospital or health care centre. Lump sum of sum insured for death. Maximum limit for bodily injury is 50% of sum insured and for the later is only 80,000/-
Insured – Covers while travelling in land highway by Motor Vehicle.
Age Limit – No age limit. For any passengers.
Term – 1 trip
Sum Insured – Ks. 3,000,000 (1 unit)
(Limit of sum insured is up to2units for each passenger)
Premium – Ks. 300 (1 unit)
Benefit – Lump sum of sum insured for dead and total permanent disability. Maximum80% of sum insured (Ks. 2,400,000 is provided for bodily injury.
Hospitalization benefit is Ks. 2,400/- per week up to 52 weeks.
Health Insurance – Cover some part of medical expenses of those in patient who
Age Limit –6to 65
Sum Insured – For 1 unit, Maximum Ks. 450,000 for hospitalization and Ks.1,000,000
For death by accident. Maximum limit of sum insured is up to5units each.
Premium – Ks. 50,000 (1 unit)
Benefit – Provided Ks. 15,000 per day up to 30 days. In patient who has been taking treatment in hospital for at least4days is entitled. (initial examination or diagnosis days before treatment are not entitled). Dead caused by accident is entitled Ks. 1,000,000.
Address of Aung Myint Moh Min Insurance Co. Ltd.
No(28), Corner of Pantra Street & Shwedagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon Division, Myanmar.
Contact phone, Fax and e-mail for any queries –
0095-1-378962 (Fax), 0095-1-378963, 0095-1-378964
၁။ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော အသက်အာမခံအမျိုးအစားများ
( က ) ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ
( ခ ) အားကစားသမားကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ
( ဂ ) စုပေါင်းအသက်အာမခံ
( ဃ ) မြွေအန္တရာယ်အာမခံ
( င ) ကျန်းမာရေးအာမခံ
( က ) အသက်ကန့်သတ်ချက် ။ အသက် ၁၀ နှစ် မှ ၅၅ နှစ်အထိ ထားရှိနိုင်သည်။
( ခ ) အာမခံသက်တမ်း ။ အနည်းဆုံးအာမခံသက်တမ်း (၅) နှစ်ထားရမည်။
( ဂ ) အာမခံထားငွေ ။ အနည်းဆုံးကျပ်(၅၀,၀၀၀ိ/-)မှအများဆုံးကျပ်(၃၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/-)
( ဃ ) ပရီမီယံကြေး ။ အာမခံထားသူ၏ အသက်၊ အာမခံသက်တမ်းနှင့် အာမခံထား ငွေအရ ပရီမီယံ သတ်မှတ်ထားသည့် ဇယားအတိုင်း ပေးသွင်းရပါသည်။ (အာမခံထားသူ ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင်အပိုနှုန်းများအရ အပိုကြေးထပ်ဆောင်းပေး သွင်းရပါသည်။)
( င ) အကျိုးခံစားခွင့် ။ အောက်ပါအကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်-
( ၁ ) သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် ။ အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားသူသေဆုံးလျှင် အာမခံထားသူသေဆုံးလျှင် အာမခံထားငွေအား အကျိုးခံစားခွင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ခံရသူသို့ တစ်လုံးတည်း ထုတ်ပေးပါသည်။
(၂ ) ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန် အကျိုးခံစားခွင့် ။ အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း အတွင်း ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန်ဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေကို တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါ သည်။
( ၃ ) နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့် ။ အသက်အာမခံထားရှိသည့် သက်တမ်းစေ့ပါက အာမခံထား သူအား အာမခံထားငွေကို တစ်လုံးတည်း ထုတ်ပေးပါသည်။
( ၄ ) အမ်းငွေ ။ အာမခံထားသူသည် တည်မြဲသည့် အသက်အာမခံပေါ်လစီတွင် အမ်းငွေ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ အာမခံသက်တမ်း(၅)နှစ်မှ (၁၂)နှစ်ထိ သက်တမ်းတို ပေါ်လစီတွင် ပရီမီယံ(၂)နှစ် ပေးသွင်းပြီးလျှင် အမ်းငွေခံစားခွင့်ရှိသည်။ အာမခံသက်တမ်း (၁၃)နှစ် နှင့် (၁၃)နှစ်အထက် သက်တမ်းရှည်ပေါ်လစီတွင် ပရီမီယံ(၃)နှစ် ပေးသွင်းပြီးလျှင် အမ်းငွေ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
အမ်းငွေ = ပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံ၏ ၃၀%
( ၅ ) စာရင်းပိတ်တန်ဖိုး ။ အသက်အာမခံပေါ်လစီတွင် အမ်းငွေမထုတ်ယူလိုပါက စာရင်း ပိတ်နိုင်သည်။ စာရင်းပိတ်တန်ဖိုးကို ပေါ်လစီသက်တမ်းစေ့ရောက်မှသာလျှင် ထုတ်ယူနိုင်သည်။
( ၆ ) တန်ဘိုးလျော့ ။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံပေါ်လစီတွင် နှစ်စေ့ရန်(၂)နှစ် အလိုတွင် တန်ဘိုးလျော့ တောင်းခံငွေ ထုတ်ယူနိုင်သည်။
(၇ ) ချေးငွေ ။ အာမခံထားသူသည် အမ်းငွေ၏ ၉၅% ကို ချေးယူနိုင်ပါသည်။ ချေးငွေ အနေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၆.၂၅% အတိုး ပေးရပါမည်။
( စ ) ဆေးစစ်ခြင်း ။ အာမခံထားသူတိုင်း ဆေးစစ်ရပါမည်။
( က ) အာမခံထားသူ ။ အားကစားသမားများ (ကျောင်းလက်ရွေးစင်မှ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အဆင့်ထိ) ထားနိုင်သည်။ အားကစားသမားများ လေ့ကျင့်စဉ်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်စဉ်ကာလ အတွင်း မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့် သေဆုံးမှုများအတွက် အကာအကွယ်ရရှိမည်။
( ခ ) အသက်ကန့်သတ်ချက် ။ ၁၀ နှစ် မှ ၆၀ နှစ် အထိ
( ဂ ) အာမခံသက်တမ်း ။ ၁ နှစ်
( ဃ ) အာမခံထားငွေ ။ ကျပ်(၁၀)သိန်း၊ (၁ ယူနစ်)
(အားကစားသမားတစ်ယောက်လျှင် အာမခံထားငွေ(၅)ယူနစ်ထိ ထားနိုင်သည်။)
( င ) ပရီမီယံ ။ ကျပ် (၅,၀၀၀ိ/-)၊ (၁ ယူနစ်)
( စ ) အကျိုးခံစားခွင့် ။ သေဆုံးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန်ဖြစ်လျှင်သော် လည်းကောင်း အာမခံထားငွေ တစ်လုံးတည်း ထုတ်ပေးပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရမှုအတွက် အာမခံထားငွေ၏ ၅၀%ကို အများဆုံး ထုတ်ပေးပါသည်။
ဆေးရုံတက်ရခြင်းအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ကျပ် ၁၀,၀၀၀ိ/- (ရက်သတ္တပတ် ၅၂ ပတ် အထိသာ)
( က ) အာမခံထားသူ ။ အလုပ်ရှင်မှလည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်သားများဆန္ဒအလျောက် လည်းကောင်း အာမခံထားနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအလုပ်သမား(၅)ဦး ရှိရမည်။
( ခ ) အသက်ကန့်သတ်ချက် ။ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
( ဃ ) အာမခံထားငွေ ။ အလုပ်သမားတစ်ဦးလျှင် အာမခံထားငွေ အနည်းဆုံး ကျပ်(၁၀,၀၀၀ိ/-) မှ အများဆုံး ကျပ်(၅,၀၀၀,၀၀၀ိ/-)ထားရှိနိုင်ပါသည်။
( င ) ပရီမီယံ ။ အာမခံထားငွေ ကျပ်(၁၀,၀၀၀ိ/-)လျှင် ပရီမီယံ ကျပ်(၁၀၀ိ/-)(အာမခံ ထားငွေ၏ ၁%)
( စ ) အကျိုးခံစားခွင့် ။ သေဆုံးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထာဝစဉ် မစွမ်းမသန်ဖြစ်လျှင်သော် လည်းကောင်း အာမခံထားငွေ တစ်လုံးတည်းထုတ်ပေးပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ မှုအတွက် အာမခံထားငွေ၏ ၅၀% ကို အများဆုံး ထုတ်ပေးပါသည်။
( ဆ ) ဆေးစစ်ခြင်း ။ အသက်(၄၅)နှစ် ကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံထားငွေ ကျပ်(၁)သန်းအထက် ကျော်လျှင်သော်လည်းကောင်း ဆေးစစ်ရပါမည်။
( က ) အာမခံထားသူ ။ မည်သူမဆို ထားရှိနိုင်ပါသည်။ မြွေကိုက်ခံရခြင်းအတွက်သာလျှင် အကာအကွယ်ပေးပါသည်။
( ခ ) အသက်ကန့်သတ်ချက် ။ အသက်အရွယ်မရွေး ထားရှိနိုင်သည်။
( ဃ ) အာမခံထားငွေ ။ ကျပ် (၅၀၀,၀၀၀ိ/-)၊ (၁ ယူနစ်)
(လူတစ်ယောက်လျှင် အာမခံထားငွေ အများဆုံး(၁၀)ယူနစ်အထိ ထားနိုင်သည်။)
( င ) ပရီမီယံ ။ ကျပ် (၅၀၀ိ/-)၊ (၁ ယူနစ်)
( စ ) အကျိုးခံစားခွင့် ။ သေဆုံးမှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံ(သို့) ကျန်းမာရေးဌာနတွင် ဆေးကုသမှုအတွက် ဆေးကုသစရိတ် ထုတ်ပေးပါသည်။ သေဆုံးမှု အတွက် အာမခံထားငွေ တစ်လုံးတည်း ထုတ်ပေးပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အတွက် အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်မှာ အာမခံထားငွေ၏ ၅၀% ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်၍ ဆေးဝါးကုသခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်အတွက် အများဆုံးကျပ် ၈၀,၀၀၀ိ/- ဖြစ်သည်။
၆။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ။ ဆေးရုံတက်ဆေးကုသရခြင်းကြောင့် ဆေးကုသစရိတ်ကို အကာအကွယ် ရရှိ မည်-
( က ) အသက်ကန့်သတ်ချက် ။ ၆ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်ထိ
( ခ ) အာမခံသက်တမ်း ။ ၁ နှစ်
( ဂ ) အာမခံထားငွေ ။ ကျပ် (၁,၀၀၀,၀၀၀ိ/-)လျှင် (၁ ယူနစ်)။ (၅ ယူနစ်အထိ ထားရှိနိုင်သည်။)
( ဃ ) ပရီမီယံ ။ ကျပ် (၅၀,၀၀၀ိ/-)၊ (၁ ယူနစ်)
( င ) အကျိုးခံစားခွင့်
( ၁ ) ဆေးရုံတက်ရက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ်(၁၅,၀၀၀ိ/-) နှင့် ဆေးရုံတက်ရက်အများဆုံး ရက်ပေါင်း(၃၀)အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ (ဆေးရုံတက်ရက် အနည်းဆုံး(၄)ရက်နှင့် အထက်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ အာမခံထားသူဆန္ဒအရ ဆေးစစ်ရန် ဆေးရုံတက်ခြင်းအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။)
( ၂ ) မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် ကျပ်(၁၀)သိန်း။
(မတော်တဆ ထိခိုက်မှုကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ဆေးကုသ စရိတ်အပါအဝင် အများဆုံး ကျပ် (၁၀)သိန်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။)
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ
အမှတ်(၂၈)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းနှင့် ပန်တျာလမ်းထောင့်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း၊ ၀၁-၃၇၈၉၆၂၊ ၃၇၈၉၆၃၊ ၃၇၈၉၆၄
« Innwa Bank Limited	» Remote Sensing Ground Station